China Disposable elastic earloop band fekitori uye vagadziri | Limeng
Disposable kwakavharwa nenyama earloop bhendi
Kambani yedu yakatengesa michina yekugadzira yehunyanzvi uye tekinoroji yepamusoro yekugadzira iyo yakasununguka nzeve chiuno bhendi. Iyo huru mbishi zvinhu ndeye chinlon uye spandex. Tinogona kupa akawanda-mavara nzeve loop bhendi. Iyi nzeve chiuno bhendi chena ruvara, uye upamhi i3mm kutenderera. Iyo inokodzera kuraswa yakatsemuka mhando yekurapa kana yekuvhiya kumeso kumeso.
Kazhinji, nzeve yakasungwa bhendi kumeso kumeso, simba rayo iri 17 N.
Tine mabhegi kana rolls package
Kutumira kunogona kuitwa nendege kuratidza nekukurumidza.
Kune kusarudzwa kwemasks anokwanisa kuraswa, zvirinani kusarudza masiki ekurapa anoraswa, uye mazwi emasikisi ekuvhiya anozoratidzwa pane kavha.
Masiki ekuvhiya ekurapa akanaka kwazvo pakudzivirira kuyerera kwemvura, pakati payo iyo yekusefa mhedzisiro yezvinhu zvakakura kupfuura mashanu ma microns mumhepo anodarika 90%. Panyaya yekugona kudzivirira kupararira kwebhakitiriya uye madonhwe ehutachiona, masiki ekuvhiya akanaka kwazvo.Can kudzivirira hutachiona uye bhakitiriya kuti zvipinde nzira yekufema zvinobudirira, zvine simba rekudzivirira kudzivirira. rukoko rwusina mvura, iyo yepakati dura ndiyo firita yakaturikidzana, yepakati denderedzwa ndiyo nyaradzo, kazhinji inopesana nemhirizhonga, uyezve kune mhino nedama uye nzeve mabhendi, iyo maski inonyanya kukodzera paganda. nguva, zvinodikanwa kupfeka iyo mask nenzira kwayo, kuitira kuti zvirinani kutamba basa redziviriro.
Novel Coronavirus hutachiona hwakanyanya kunyanya gore rino. Chete kana mumwe nemumwe wedu achiziva uye nekuzvidzora kuti aite basa rakanaka rekudzivirira, kugeza maoko kakawanda, kufefetedza mweya nguva zhinji, kuchengeta chinhambwe chemagariro uye kuzviita tsika yezuva nezuva uye nekuziva maitiro ehutano ndipo patinogona kudzivirira hutachiona kubva mungano Coronavirus.
Masiki ekurapa anoraswa kana masiki ekuvhiya anofanirwa kupfekwa muzviitiko zvinotevera
1. Bhazi, tekisi, murairidzi, chitima nevamwe vashandi vevanhu nezvifambiso zvevoruzhinji.
2. Vese vashandi munzvimbo dzeruzhinji uko vanhu vanowanzo kuungana, senge nzvimbo dzekutengesera, masupamaketi, dzimba dzekuratidzira, mamuseum, dzimba dzekurovedza muviri, mabhaisikopo nemitambo yemitambo, dzimba dzekunamatira, mashopu, ma cafes epaInternet, maelevator evan uye zvichingodaro.
3. Vese vashandi munzvimbo dzekunze senge mapaki uye makwere asingakwanise kuchengeta nharaunda yakachengeteka yenzanga inopfuura 1 mita.
4.Vashandi nevashandi vemuzvitoro, maresitorendi, dzimba dzekudyira, mahotera, ese marudzi e "madiki masuo", madhesiki ekugamuchira makambani nedzimwe nzvimbo.
5. Vashandi vepachipatara vari kutsvaga kurapwa, kushanya kana kuperekedzwa.
6.Vashandi vekune dzimwe nyika uye vanopa rubatsiro mumisha inochengeterwa vakwegura, dzimba dzekugara, majeri nenzvimbo dzehutano hwepfungwa.
Pfeka mamask kudzivirira iwe neni
Pashure: Disposable yekurapa kumeso mask
Zvadaro: Inoraswa hutachiona sampling chubhu
Inoraswa Earloop YeMeso Mask
Inoraswa Elastic Band Earloop
Kwakavharwa nenyama Earloop
Kumeso Mask Earloop
Chiso Mask Ye Earloop Inoraswa
Disposable yekurapa kumeso mask
Inoraswa hutachiona sampling chubhu